रजौटा सोच र प्रबृत्ती अन्त्य गर्न बोल्ड नेतृत्व आबस्यक ’ काली बहादुर घर्ती « Kathmandu Television HD
रजौटा सोच र प्रबृत्ती अन्त्य गर्न बोल्ड नेतृत्व आबस्यक ’ काली बहादुर घर्ती
नेपाली खेलकुद नेपाली राजनितीका दुइ प्रमुख शक्ति एमाले र एमाओबादी एकीकरण पछि यसका भातृसंगठनको एकीकरण प्रक्रिया अझै पुरै टुंगोमा पुगेको छैन । एकीकरण पूर्व एमाओबादीको जनबर्गीय संगठन अखिल नेपाल खेलकुद महासंघका महासचिवको जिम्मेवारी काली बहादुर घर्तीले निभाएका थिए । नेपाली राजनितीमा आएका थुप्रै आरोह अबरोहका वावजुद घर्ती समानताको मुद्धामा अझै अडिग छन् । यसकारण नै उनलाई पूर्वमाओबादीको साचोँ प्रतिनिधी मान्नेको बाक्लो उपश्थिती छ । प्युठानका स्थायी बासीन्दा घर्ती मगर तत्कालीन माओवादी भुमिगत काल देखि निरन्तर राजनितीक गतीबीधीमा उत्तिकै सक्रिय छन् । घर्ती हाल नेपाल मार्सल आर्ट्स हाप्कीडो संघका अध्यक्ष पनि हुन् । साथै उनी सोही खेलको दक्षिण एसियाली महासंघको अध्यक्ष पनि हुन् ।
नेपाली खेलकुदको पछिल्लो अबस्था बारे भन्नुस न ।
खेलकुदका केही आधारभुत पक्ष छन् । प्रशिक्षण, प्रतियोगिताको आयोजना र भौतीक संरचना निमार्ण महत्वपूर्ण हुन् । यी मध्य प्रतियोगिताको आयोजना भयो । भौतीक संरचना पनि निमार्ण हुदै छ । तर, प्रशिक्षण व्यवस्थित छैन । म कसैलाई आरोप लागउन त चाहन्न तर, व्यवस्थित प्रशिक्षण विना चल्छ जस्तो लाग्दैन ।
नेपाली खेलकुद अहिले सही ढंगले चलेको छ जस्तो लाग्छ ?
अहं छैन । नितीहिन र दिसा हिन छ । योजना बिहिन छ । मनपरीतन्त्र सुनेका छु । म एउटा त्यसतो राजनितीक शक्तिको जनबर्गीय संगठनमा आबद्ध भएर आएँ, जुन राजनितीक शक्ति विकृती र विसंगतीको विरुद्धमा लड्नेहरुलाई केन्द्रिकृत गर्दै तयार भएको हो । हिजाको भन्दा फरक अबस्था छ । म आवद्ध दलले राज्यको नेतृत्व गरेको छ । अब, नेतृत्वमा उपश्थित भएर हाम्रा मुद्धालाइ स्थापीत गर्ने र खेलकुदको विकास गर्ने दुवै सवालमा अघि बढ्ने नै छौ ।
अहिले चाहीँ तपाइको भुमिका नी ?
अहिले भुमिका नभएको जस्तै देखिएको छ । देशको खेलकुदले नयाँ नेतृत्वको खोजी गरेको छ । तपाइले भन्नु भए जस्तै अब भुमिका चाहीएको समय हो ।
तपाइलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनु पर्ने कारण ?
नेपाली खेलकुद रजौटा प्रबृत्तीले नै चलेको छ । यसका विरुद्ध हामीले संघर्ष ग¥यौ । यसै मुद्धामा सहमत हुनेहरु एक ठाउमा हुनै पर्छ । खेलकुद सबैका लागि हो । मैले मेरो पार्टीको नेतृत्वसंग पनि कुरा गरेको छु । हिजोको जुन बर्ग र समुदायको मात्र खेलकुदमा नेतृत्व रह््यो, त्यसले आम नेपाली भावनालाइ बुझ्न नै सकेन । साचोँ भन्दा खेलकुद सबैका लागि नै भएन । राज्यको ढुकुटी सकेर कुनै कार्यक्रमको औपचारिकता पुरा मात्र गरेको देख्दा दुख लागेर आउथ्यो । तर, के गर्नु नेतृत्वमा बस्नेहरु यस्ता हुनु भयो की आम नेपालीको अबस्था र नेपाली खेलकुदमा कुन बर्ग र समुदायको उपश्थिती छ भन्ने नै चासो नभएको ।
नेपाली खेलकुद निम्न मध्यम र निम्न बर्गीय पारिवारिक पृष्ठभुमि भएकाहरुले चलाएको हो । त्यो बर्गको जिवनका पाटा बुझ्नेले मात्र अहिलेको समस्या हल गर्न सक्छ । काठमाडौं खाल्डोलाई नेपाल ठान्ने या पोखरा विराटनगर र इटहरी जस्ता ठूला शहर मात्र नेपाल ठान्नेहरुको कारण समस्या आएको हो । अबको नेृतत्व त्यो भन्दा पृथक पृष्ठभुमीको आम नेपाली खेलकर्मीको भावना बुझ्ने नै हुनु पर्छ ।
तपाइका मुख्य एजेन्डा ?
मेरा दुइ वटा एजेन्डा प्रमुख छन् । पहिलो त आर्थिक दुरुपयोगका मुद्धा । धेरैले खेलकुदमा बजेट कम भएको आवाज उठाउनु हुन्छ । मेरो फरक मत छ,परिणाम र उपयोगी कुरामा मात्र खर्च गरे यसै बजेटले धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ । अहिलको समस्या आर्थीक दुरुपयोग हो । दुरुपयोगको अर्थ भ्रस्टाचार मात्र होइन । खर्च नगर्दा हुने ठाउँमा खर्च गर्ने र खर्च गर्नु पर्ने ठाउँमा नगर्ने , यो पनि दुरुपयोग हो । एउटा यस्तो नेतृत्व चाहीयो, जसले यो भन्दा कम बजेट राज्यले दिदाँ पनि राम्रो परिणाम ल्याउन सफल होस् । त्यसका लागि आर्थीक दुरुपयोगको अन्त्य नै हो । मैले एउटै कुरामा किन जोड दिए भने आम नेपालीको प्रतिनिधत्व नभएको कारण खेलकुदमा समस्या भएको हो ।
दोश्रो नेतृत्व गर्ने ब्यक्ति न्युनतम खेलकुदका विषयमा जानकार त चाहीयो नै । कि ब्ल्याकबेल्ट हुनु प¥यो, कि राष्ट्रिय खेलाडी हुनु प¥यो होइन भने अन्तराष्ट्रिय तहको प्रशिक्षक या रेफ्रि चाहीयो । त्यो पनि होइन भने आफूले कुनै संघको नेतृत्व गर्दा कायापलट गरेको होस ।
अहिलेको समस्या र विवादको जड के हो ?
जड भनेको ब्यक्तिगत स्वार्थ नै हो । नेपाली समाज र राजनितीमा भिन्न परिवर्तन भए । तर, यसले खेलक्षेत्रमा कहिले पनि परिवर्तन गरेन । हिजोको रजौटा सोच यथाबत छ । ब्यक्ति फेरिएका छन् । अनुहार फेरीएका छन् तर, नेतृत्वमा रहनेको सोच फेरीएको छैन । एउटा दुरदराजको सामान्य नेपाली ठूलो मिहेनतका साथ आफूलाई स्थापीत गर्छ । तर उनीहरुको भबीश्य केही रजौटा प्रबृत्ती र सोच भएका नेतृत्वको भरमा छ । खेलकर्मी भनेको आम नेपाली नै हो । नेतृत्व रजौटा प्रबृत्ती भयो । यसकारण पनि नेतृत्वले खेलकर्मीको समस्यालाई बुझ्न सकेन । हिजो राजतन्त्रको विरुद्धमा हामीले संघर्ष गरेका थियौ । खेलकदुमा ठकुरीवाद र रजौटा प्रबृतीको अन्त्य गर्ने की नगर्ने ? यसका लागि नेतृत्व नै सबै ढंगले आम नेपालीको प्रतिनिधीत्व हुने खालको हुनु पर्छ भन्ने हो ।